अम्बामा पाइन्छ आइरन र हेमोग्लोबिन, जान्नुहाेस ! कस्ताे समस्याकाे लागि हुन्छ उपयाेगी ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperअम्बामा पाइन्छ आइरन र हेमोग्लोबिन, जान्नुहाेस ! कस्ताे समस्याकाे लागि हुन्छ उपयाेगी ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
काठमाडौं, ४ मङसिर । अम्बा नपाउने ठाउँ बिरलै हुन्छ र नखाने मानिस पनि भेट्याउनै मुस्किल पर्छ । तर, यो अम्बा धेरै रोगको औषधि हो भन्ने चैं कमैलाई थाहा होला । यसमा आयुर्वेदिक औषधीय गुण पनि हुन्छ । अम्बामा प्रशस्त मात्रामा आइरन र हेमोग्लोबिन पाइन्छ ।
काँचो र पाकेको दुवै अवस्थाको अम्बा स्वस्थकर हुन्छ । आधा पाकेको अम्बाले पेटसम्बन्धी रोगका लागि फाइदा पुर्याउँछ । पाकेको अम्बाले तागत बढाउनसमेत मद्दत गर्छ ।
अम्बाको पातमा एन्टिसेप्टिक गुण पाइने हुनाले डन्डिफोर हटाउन मद्दत गर्छ । अम्बाको ताजा पातलाई पिसेर डन्डिफोर भएको ठाउँमा लगाउनुपर्छ । नियमित रूपमा यसको प्रयोगबाट बिस्तारै डन्डिफोरको समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।